Raspberry Pi ကို ကျေးဇူးတင်၍ 3Dရာမ XNUMXD စကင်နာတစ်ခုဖန်တီးပါ အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
Joaquín Garcia က Cobo | | ပုံနှိပ် 3D, Raspberry Pi
3D ပုံနှိပ်ခြင်းလောကသည်လျင်မြန်စွာတိုးတက်နေသည်။ သို့သော်လက်ရှိ 3D ပုံနှိပ်ခြင်းသည် 3D မော်ဒယ်များကိုရယူပြီး၎င်းတို့ကိုပုံနှိပ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။ တနည်းအားဖြင့်မူရင်း 3D မော်ဒယ်များကိုသင်မဖန်တီးတတ်ပါ။ ၎င်းအတွက်အသုံးပြုသူများသည် object scanner ကိုသုံးသည်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့မှာ object Scanner မရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ပိုကြီးတဲ့အရာဝတ္ထုကိုစကင်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်။ ငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲ?
ဗြိတိန်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး သည်အဖြေကိုရှာဖွေနိုင်ခဲ့သည်။ ဒီထုတ်လုပ်သူကိုခေါ် Poppy Mosbacher ကလူသားတွေအတွက် 3D Scanner တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ ဒီ gadget ကိုသူ့ကုမ္ပဏီအတွက်ဖန်တီးထားပြီး 3D မော်ဒယ်များကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖန်တီးနိူင်တဲ့ဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
Poppy Mosbacher က Free Hardware နဲ့ Free Software သုံးပြီး 3D Scanner တစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့တယ်။ ဤအချိန်တွင်သူသည် Arduino စီမံကိန်းမှဘုတ်များကိုမသုံးသော်လည်း Raspberry Pi မှပျဉ်ပြားများကိုအသုံးပြုသည်။ သတ်သတ်မှတ်မှတ် Pi Cam နှင့် Raspberry Pi Zero ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်.
ဤဘုတ်အစုံသည် ၂၇ ကြိမ်ပုံတူပွားခဲ့သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာစကင်နာသည် Raspberry Pi Zero ပျဉ်ပြား ၂၇ ခုနှင့်Piရာမဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုလုံးတွင်ဖြန့်ဝေထားသော ၂၇ PiCams ကိုအသုံးပြုသည်။ ဒီiantရာမဖွဲ့စည်းပုံကိုဖန်တီးနေကြသည် ကတ်ထူပြားပြွန်နှင့်ကြိုးနှင့်အတူ ဘုတ်များအားလုံးကိုဆာဗာတစ်ခုအနေဖြင့်အလုပ်လုပ်သောစက်တစ်ခုတည်းနှင့်ချိတ်ဆက်ပေးသည်။ ဒီiantရာမ 3D စကင်နာကိုသုံးရန်အသုံးပြုသော software သည် Autocade ReMake3D မော်ဒယ်တစ်ခုဖန်တီးရန်ပုံရိပ်များကိုလုပ်ဆောင်သောဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခု။
ကံကောင်းထောက်မစွာ ဒီ3Dရာမ XNUMXD စကင်နာကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ပုံတူပွား။ တည်ဆောက်နိုင်သည် ဖန်တီးသူကမှ upload လုပ်ပြီးကတည်းက Instructables repository ကို။ ဒီ repository မှာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလမ်းညွှန်၊ တည်ဆောက်မှုလမ်းညွှန်နှင့် Pi Zero ပျဉ်ပြားအားလုံးအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သောဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုတွေ့ရသည်။ Pi Zero board များသည်စွမ်းအားနိမ့်ခြင်းကြောင့်နာမည်ရလေ့ရှိသော်လည်း၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်သည်။ အနည်းဆုံးအသုံးပြုသူအတွက်အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။ မထင်ဘူးလား
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » ပုံနှိပ် 3D » Raspberry Pi ကိုသုံးပြီး 3D Scanner ကြီးတစ်ခုဖန်တီးတယ်
ကျနော်တို့ကင်မရာ3နှင့်အတူ 108D စကင်နာကိုဖန်ဆင်းပါပြီ။
DeltaQuad အမည်ရှိမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်သည်ကီလိုမီတာ ၁၅၀ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိနိုင်သည်
BASF သည်ဒတ်ချ်နန်းကြိုးအမျှင်ထုတ်လုပ်သူ Innofil3D ကိုထိန်းချုပ်သည်